घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू नाइजेरियन फुटबल खेलाडीहरू उज्यालो ओसाई-शमूएल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो उज्ज्वल ओसाई-शमूएल जीवनीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्था, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, अभिभावक, प्रेमिका / पत्नी, जीवनशैली, नेटवर्थ र व्यक्तिगत जीवनमा तथ्यहरू बताउँदछ।
स्पष्ट शब्दहरुमा, हामी तपाईलाई ब्राइटको जीवन कहानीमा ध्यान पुर्‍याउने घटनाहरूको कथा ल्याउँदछौं, शुरुका दिनहरूदेखि लिएर जब उनी प्रख्यात भए।
हो, तपाइँ र मलाई थाहा छ एट्याकिंग मिडफिल्डरलाई उसको पुस्ताको सर्वश्रेष्ठ ड्राईबलरहरू मध्ये एक मानिन्छ। यद्यपि धेरै प्रशंसकहरूलाई उनको जीवनको कथा थाहा छैन जुन पढ्न मनमोहक छ। अब थप कुनै विज्ञापन बिना, सुरु गरौं उसको शुरुको सालहरु बाट।
उज्यालो ओसाई-शमूएल बाल्यकाल कहानी:
बायो स्टार्टर्सका लागि, नाइजेरियन-अ English्ग्रेजी फुटबलरले उपनाम ब्राइटो राख्छ। उज्यालो ओसाई-शमूएल डिसेम्बर १ 31 1997 of को XNUMX१ औं दिनमा नाइजेरियाका आमाबुबाको लागि ओकिजा, अनम्ब्रा स्टेट, नाइजेरियाको जन्म भयो।
आफ्नो जीवनको प्रारम्भमा, उज्यालो ओसाई-शमूएलको परिवार स्पेनमा बसाई सरे जहाँ उनीहरू नौ वर्षको उमेर नपुगुन्जेलसम्म बसोबास गर्थे। १० बर्षको उमेरमा उनका आमाबुबा इ England्ल्याण्डमा बसाइँ सरेर लन्डनको वूलविचमा बसाई सरे।
उज्यालो ओसाई-शमूएल परिवार पृष्ठभूमि:
समय बित्दै जाँदा, धनी नाइजेरियाको घरको चिन्ह एकदम स्पष्ट हुन्छ, उनीहरूको विदेशी जीवन शैलीमा देखिएझैं। निस्सन्देह, वि j्गर र उसको ममतालाई निजी जेटको भ्रमणमा हेर्दा पारिवारिक स्थिति प्रकट हुन्छ।
सबै ईमानदारी मा, तपाईं मसँग सहमत हुनुहुन्छ कि उज्यालो Osayi-शमूएल अभिभावक धनी छन्। तिनीहरू सम्भवतः यस्तो प्रकारका हुन्छन् जसले औपचारिक शिक्षा लिएका थिए र आफ्नो प्यारो छोरोलाई वहन गर्न सक्थे, जीवनमा उत्कृष्ट हुनको लागि उहाँ सबै कुरा चाहिन्छ।
उज्यालो ओसाई-शमूएल परिवार उत्पत्ति:
हामी सबैलाई थाहा छ फुटबलर नाइजेरियाबाट आएको हो। यद्यपि धेरै प्रशंसकहरूले सोधेका छन्; नाइजेरियाको कुन राज्य उज्यालो ओसाई-शमूएलबाट आएको हो वा असिनाको हो?
तथ्यलाई सही बनाऔं, जब आफ्ना माता-पिताले उनलाई ओकिजामा जन्म दिएका थिए, अन्नाम्रा स्टेटको अर्थ ब्राइट ओसाई-शमूएलको उत्पत्ति पूर्वी नाइजेरियाबाट भएको होइन।
सत्य यो हो कि ओसाई नामको उत्पत्ति एदो राज्य, नाइजेरियाबाट भएको हो। यो बेनिनको नाम हो जसको अर्थ हो 'भगवानले सृष्टि गर्नुभयो।' निहितार्थबाट, उज्यालो ओसाई-शमूएलको परिवार नाइजेरियाको इडो राज्यमा अवस्थित बेनिन शहरका हुन्। यो तथ्य प्रशंसकहरूले अक्सर 'सोशल मिडियामा उसको पोस्टमा' इडो टु वर्ल्ड 'शब्दका साथ टिप्पणी गरेको देखिन्छ।
उज्यालो ओसाई-शमूएल शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप:
उसको बाल्यकालदेखि नै नाइजेरियाको जन्म हुने विger्गरले पेशेवर फुटबल खेल्न रुचि देखायो। प्रारम्भमा, उनले ओजिका, अनम्ब्रा राज्य, नाइजेरियाको स्थानीय क्षेत्रमा आफ्नो फुटबलको व्यापार सिक्न शुरू गरे।
राम्रो भविष्यको लागि, उज्यालो ओसाई-शमूएलका अभिभावकहरूले निर्णय गरे कि उनीहरूको छोराको फुटबल शिक्षा विदेशमा हुनेछ। यसैले स्पेन र त्यसपछि इ England्ल्याण्डको आन्दोलन जहाँ उनले फुटबल परीक्षणमा भाग लिने अवसर पाए।
उज्ज्वल ओसाई-शमूएलले आफ्नो परिवारको घरको नजिक लन्डनको वूलविचको पार्कमा फुटबल खेल्दै बेलायतमा जीवन शुरू गरे। १ 16 वर्षको उमेरमा, युवाका लागि जीवन परिवर्तन भयो जब परीक्षणको लागि आवेदन उनको बुबा र आमाले चाहेको टोलीको लागि गए।
सबै अंग्रेजी क्लबहरू मध्ये यो दूर ब्ल्याकपूल एफसी एकेडेमी थियो। र तपाईंलाई थाहा थियो?… उज्यालो ओसाई-शमूएलले म्यानचेस्टर युनाइटेड ट्रान्सफर अस्वीकार गर्नुभयो ब्ल्याकपूलको पक्षमा। फ्यूचर स्टारका लागि, त्यहाँ सानो क्लबमा सफल हुने बढी संभावनाहरू छन्।
बलिदानको एक भागको रूपमा, उज्यालो ओसाई-शमूएलका अभिभावकहरूले आफ्नो छोरालाई आफ्नो परिवारको घरबाट (लन्डनमा) 4.5. hours घण्टासम्म उत्तर इ England्गल्यान्डको (ब्ल्याकपूल) यात्रा गर्नुपर्‍यो।
उज्यालो ओसाई-शमूएल प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
जवान वि win्गरले परिपक्व हुन थालेपछि उनले आफूलाई सीसाइडर्सको साथ जीवनमा राम्रोसँग बसिरहेको देखे। तेज देखिने बच्चाले एकेडेमी मार्फत सजिलैसँग प्रगति गर्यो र उसको गति र ड्रिबलि powers शक्तिको लागि सबै धन्यवाद छ।
ती दिनहरूमा, मानिसहरूले उसलाई आत्मविश्वासको साथ आत्मविश्वास भएको बच्चा भनेर चिनाउँथे, जसले आफ्नो कलालाई थाहा पाउँथ्यो, उसले केही महिनामा क्लब बढ्थ्यो।
उज्यालो ओसाई-शमूएल जीवनी- फेम कहानी कहानी:
निस्सन्देह, २०१-2014-2015२०१ season को अन्त्य युवाको लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण थियो। यो त्यस्तो समय थियो जब उनले ब्ल्याकपूलको लागि १ professional वर्षको उमेरमा March मार्च २०१ prec मा ठ्याक्कै प्रोफेशनल डेब्यू गरेका थिए।
सामान्यको रूपमा, प्रत्येक एकेडेमी स्नातकको सपना पहिलो टीममा बनाउनु हो। तथ्य कुरा के हो भने, यो आफैले र उसको परिवारका सदस्यहरूले कुनै बलिदान नगरीकन आउँदैनथ्यो।
तलको चित्रमा, यस्तो देखिन्छ कि ब्राइटलाई उनका बुबाले लन्डनदेखि ब्ल्याकपूल शहरसम्म सारेका थिए। के कारण उसलाई कार मा सुत्न? उहाँ जस्तो मेहनतीले आराम पाउनु हुँदैन भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्ने कुनै ठाउँ छैन।
उज्यालो ओसाई-शमूएल फेम कथामा उठ्छन्:
निस्सन्देह, आफ्नो सपना साकार पार्नको लागि कडा दृढ संकल्प भएका नौजवानलाई कडा परिश्रम गरिएको छ।
तपाईंलाई थाहा छ? उज्जवल स्वाभाविक रूपमा प्रतिभाशाली भयो किनकि उसले खेलमा एक स्पिड राक्षस बन्ने देख्यो। आजको दिनसम्म, स्पीड-ड्रिबलि the फुटबलरको लागि अनमोल सम्पत्ति भएको छ। तपाईंको भोक जगाउनको लागि, यहाँ उहाँको गुणको झलक छ।
नाइजेरियामा जन्मेका फुटबलरको सानै उमेरमा सफलताको आफ्नै अंश थियो। के तपाईंलाई थाहा छ?… ऊ ब्ल्याकपूल टीमको हिस्सा थियो जसले २०१ 2017 मा EFL लिग दुई प्ले-अफ जित्यो।
उसको गति, शक्ति र छलको धेरै देखेर क्यूपीआरले यसलाई समात्न सकेन किनकि उनीहरूले आफ्नो हस्ताक्षरको लागि माग गरे।
क्लबमा, ब्राइट ओसाई-शमूएलले साथी नाइजेरियालीसँग एक ठूलो साझेदारी बनाए Eberechi Eze। सँगै, नाइजेरियाको जोडीले विपक्षी डिफेन्सलाई पछाडि पारे - ठूलो गोलहरू बनाए र असंख्य सहयोगीहरू उत्पादन गरे।
उज्ज्वल ओसाई-शमूएलको जीवनी लेख्दा, स्पीडस्टारले अब भाग्य सुनेको छ उसलाई शीर्ष उडान लिगमा सम्भवतः EPL भनिरहेको छ। जे भए पनि, हामी उहाँलाई शुभकामना दिन्छौं। बाँकी, हामी भन्छौ (तल भिडियो सहित), अब इतिहास हो।
उज्यालो ओसाई-शमूएलको प्रेमिका को हो?
उनको नाममा ठूलो सफलताको कहानीको साथ, त्यहाँ एक अचम्मको महिला उनको आँखा घुमाउने सम्भावना छ। फेरी, उनका केही महिला प्रशंसकहरू उनकी पत्नी वा आफ्नो बच्चाको आमा बन्ने सपना देख्न थालेका छन्।
यद्यपि हामीसँग अझै अन्तिम प्रश्न छ; ब्राइट ओसाई-शमूएलको प्रेमिका को हो?
उसको सोशल मिडिया ह्यान्डलहरूमा केहि सावधानीपूर्वक हेर्नु भएपछि, हामी एउटा निष्कर्षमा आएका छौं। उज्ज्वल ओसाई-शमूएलको बायो लेख्दा, उनले आफ्नो सम्बन्धलाई आधिकारिक बनाएका छैनन्।
अर्कोतर्फ, यो हुन सक्छ कि ऊसँग एक प्रेमिका छ जो उसको भावी पत्नी बनिन्छ तर यसलाई सार्वजनिक नबनाउने निर्णय गर्दछ, कम्तिमा अहिलेको लागि।
उज्यालो ओसाई-शमूएल व्यक्तिगत जीवन:
तपाईंले सायद पिचमा स्पीड ड्रिब्लरको रूपमा चिन्नुभयो। जे होस्, पिच बाहिर फुटबलर चिन्ने तपाईंलाई उसको व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सबैभन्दा पहिला, उज्ज्वल त्यस्तो व्यक्ति हो जसलाई मानिसहरूले नम्र, जिम्मेवार र अनुशासितको रूपमा वर्णन गर्छन्। विger्गरले स्फूर्तिदायी नम्र जीवन बिताउँदछ कि भोलि के हो भनेर चिन्तित हुँदैन।
उज्यालो ओसाई-शमूएल जीवनशैली:
निस्सन्देह, ऊ धनी परिवारबाट आएको हो, तर उसको नम्रता दुर्लभ गुण हो। हामीले यसलाई नम्र जीवनशैलीमा देखेका छौं। उज्ज्वल चमकदार पत्रिकाहरूबाट जोगिनुहोस् र एक एन्टी फ्ल्याश मनोवृत्ति छ।
उसको अभिभावकले उचित आधार बनाएकोमा धन्यवाद, उहाँ महँगो कारहरू, भोजमा र ठूला घरहरू प्रदर्शन गर्दै आदि सजिलैसँग सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ।
उज्यालो ओसाई-शमूएल पारिवारिक जीवन:
निस्सन्देह, उसको सुन्दर घर बनाउनु उसको क्यारियर पूर्तिको भावना परिभाषित गर्न आवश्यक कारक भएको छ। यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई उनको आमाबुवा र परिवारका सदस्यहरूको बारेमा बढी बताउनेछौं।
उज्यालो ओसाई-शमूएलका पिताको बारेमा:
सुरुबाट नै, फुटबलरका बुवा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भएको छ, जसले आफ्नो छोराको आत्म-छवि निर्माण गरेको वर्षौं भइसक्यो। निस्सन्देह, ओसाई-शमूएल (जेष्ठ) एक मानिस हुन् जसले आफ्नो छोराको भविष्यको बारेमा सोच्दछन्। उहाँ आफ्नो सुरुको क्यारियर दिनदेखि नै उज्यालोको मुख्य सल्लाहकार हुनुहुन्छ।
नाइजेरियाका बुवाको रूपमा जो देशको मुटुमा छन्, उनीसँग आफ्नो छोरालाई आफ्नो मातृभूमिको प्रतिनिधित्व गर्न मनाउने कुनै कुरा छैन। उज्यालो एक पटकको अनुसार भने AllNigerianSoccer;
“मैले निर्णय गरेको छु, म मेरो देश नाइजेरियाका लागि खेल्नेछु। मेरो बुवा मँ देशको लागि खेल्न चाहन्छ। साथै, टोलीका खेलाडीहरूले मलाई प्रेरित गर्छन् ”
उज्यालो ओसाई-शमूएलको आमाको बारेमा:
धेरै नाइजेरियालीहरू जस्तै, खेलाडीले अक्सर आफ्नो आमालाई "मम्जी" को रूपमा दर्शाउँछ। हाम्रो टोलीले थाहा पायो कि उसले आफैं र उसको मध्यम आयुको सुन्दर आमाले अज्ञात स्थानमा झिकेर दुबैको एक तस्वीर अपलोड गर्यो।
वयस्कको रूपमा पनि, ब्राइट अझै पनि आफ्नो सम्भाव्य अवसरमा आफ्नी आमासँग टाँसिन समय पाउँछन्। पहिले हेरेझैं, दुबै आमा र छोराले एक विशेष सम्बन्ध राखेका छन्।
उज्यालो ओसाई-शमूएल भाई बहन:
अहिलेसम्म हामी उनलाई आफ्ना बाबुआमाको एकमात्र छोराको रूपमा चिन्छौं - दाजु वा बहिनीको अस्तित्वको सम्बन्धमा थोरै कागजात सहित।
वास्तवमा, हामी एक मात्र व्यक्तिलाई थाहा छ उसले एक भाइको रूपमा लिन्छ Eberechi Eze। दुबै तारा, जैसा कि पहिले देखाईएको छ, उनीहरूको समयमा एक उत्पादक साझेदारी बनायो QPR.
उज्यालो ओसाई-शमूएल अनटोल्ड तथ्यहरू:
उसको बायोमा धेरै पढेर, यो अब केहि सत्य अनावरण गर्ने समय हो जुन हामी शर्त गर्छौं जुन तपाईंलाई फुटबलरको बारेमा कहिले थाहा थिएन। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
सबैभन्दा पहिला, उहाँ ती मध्ये एक हुनुहुन्छ सस्तो क्यारियर मोड अद्भुत चीजहरू तपाईले FIFA मा किन्नु पर्छ.
जस्तै भिक्टर ओसिम्हेन, उज्यालो एक गति स्टार हो। दुबै खेलाडीहरूसँग समान गति छ, तर ब्राइटले वेगमा अझ उत्तम छ। यो विशाल गुण हुनुको कारण उसले छोडनुपर्दछ QPR ठूलो क्लबको लागि।
तथ्य # १: उनका बुबा संयुक्त स्नबको पछाडि थिए:
अनुसार म्यानचेस्टरइभेनिंग न्यूज, उज्ज्वलले भनेका थिए कि उनका बुबाले उनलाई म्यानचेस्टर युनाइटेडमा एक युवाको रूपमा सर्न रोक्नुभयो। हामीलाई लाग्छ यो निर्णय उसको भलोको लागि थियो। समयको साथ, हामीले धेरै युवाहरू देख्यौं जसले ठूलो क्यार्सको साथ आफ्नो क्यारियर शुरू गर्छन् तर मुश्किलले आफ्नो पहिलो टीममा बनाउँदछन् वा सफल क्यारियर छन्।
तथ्य # १: तलब ब्रेकडाउन र औसत नाइजीरियाई कमाउनेसँग तुलना:
प्रति वर्ष £ 312,480
प्रति महिना £ 26,040
प्रति हप्ता £ 6,000
प्रति दिन £ 857
प्रति घण्टा £ 14.2
प्रति मिनेट £ 0.23
प्रति सेकेन्ड £ 0.003
माथिको ब्रेकडाउनबाट, स्पीडस्टरले प्रति वर्ष १ a155,823,870२ .,150,000० मिलियन नाइजेरियन नायरा कमाउँछ। N86 नाइरा कमाउने एक व्यक्ति (औसत आय) देश मा कम्तिमा XNUMX XNUMX बर्ष को लागी काम गर्नु पर्छ। यो ब्राइटले क्यूपीआरमा मात्र एक वर्षमा संकलन गर्‍यो।
तपाईंले उज्यालो ओसाई-शमूएल हेर्न सुरु गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १: उज्यालो ओसाई-शमूएलको नेट वर्थ:
माथिका तलब ताराहरूबाट न्याय गर्दा हामी भन्न सक्दछौं कि तुलना गर्दा विger्गरको सम्पत्ति त्यति ठूलो हुँदैन फोर्ब्सका अनुसार सबैभन्दा बढी भुक्तान हुने फुटबलरहरू.
त्यो भएता पनि, एक मिलियन भन्दा कम उसको कुल सम्पत्ति स्काइरोकेटमा सेट गरियो। वास्तवमा यो उसको साथी सँगी भन्दा माथि सर्न सेट गरिएको छ, माइकल ओबाफेमी.
तथ्य # १: उनको उपनामको बारेमा (उहाँको धर्मको एक सूचक):
परिवारको नाम दुबै आदिवासी (बेनिन) र ईसाई मूल हो। दुबै नामको अर्थमा "भगवान" छ। पहिलो स्थानमा ओसाईको अर्थ हुन्छ 'भगवानले सृष्टि गर्नुभयो' जबकि शमूएलको अर्थ हुन्छ 'भगवानले सुन्नुभयो।' बताइएको बिना, उज्यालो ओसाई-शमूएलको परिवारले इसाई धर्म अभ्यास गर्दछन्।
तथ्यको रूपमा, विger्गर क्यूपीआरसँग नयाँ सम्झौता अस्वीकार गरे पछि उनको जीवनको नयाँ अध्याय खोल्न लागिरहेको छ। सत्य यो हो कि ऊ क्यूपीआरलाई लामो क्लब र लिगमा छाडे पछि उहाँ अझ लोकप्रिय हुनुहुनेछ।
उज्ज्वल ओसाइ-शमूएलका अभिभावकलाई नाइजेरिया, स्पेन र अहिले इ England्गल्यान्डमा उसको विकासको प्रभावको लागि हामी उधार दिन्छौं। उनको प्रतिभा बजार गर्न, उनको सम्पूर्ण परिवारले उनलाई प्रिमियर लिग वा कुनै शीर्ष लिगमा सर्ने पक्ष लिएको छ।
निस्सन्देह, नाइजेरियाका फुटबल प्रशंसकहरूले अर्को प्रतिभालाई फुटबलमा देशको हराएको छवि भुक्तान गर्ने मार्ग देखेको बाटोमा छन्।
सबैभन्दा माथि, हामी ब्राइट ओसाई-शमूएलको जीवनी पढ्नको लागि समय निकालेको लागि 'धन्यवाद' भन्दै निष्कर्षमा पुगेका छौं। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंले लेखमा सहि नदेखिने कुनै कुरा देख्नुभयो भने। अन्यथा, हामीलाई लेख्नुहोस् (टिप्पणी सेक्सनमा) यस लेखनमा र राइजिंग फुटबलरको बारेमा तपाईंको विचारहरू।
क्यूपीआर फुटबल डायरी